China Mota Mhepo Sefa YeOEM NO.1500A023 1444RU fekitori uye vagadziri | Chuangqi
Mota Mhepo Sefa YeOEM NO.1500A023 1444RU
- Mafirita emhepo akasviba haatenderi mweya wakaenzana kuinjini sewakachena.
- Injini yakavharirwa nemhepo inozotambura nekurasikirwa kwekuita uye inoshandisa mamwe mafuta.
- Zvidimbu zvidiki zveguruva kana jecha zvinogona kukonzera kukuvara kune zvemukati zvikamu zvakaita semapistoni uye masirinda.
- Kugara uchichinja mafirita emhepo inzira isingadhuri yekuwedzera hupenyu hweinjini.
Type: Mhepo Sefa
Zvinhu: Environmental PP / PU + Non rakarukwa Fabric
Ruvara: chena; dema kana inogadziriswa
SIZE Kureba: 268, Upamhi: 184.5, Kureba: 54
Zvinyorwa: 1,100% Isina kurukwa
2.Filtration kunyatsoshanda pamusoro 99%.
Nzvimbo yeKutanga Hebei, China (yakaoma)
Kupa Mazano 50000 pcs / mwedzi
Kambani Certification ISO / TS16949; ISO9001: 2000
Customization Zvigadzirwa zvevatengi, zvinodiwa & marogo zvinogamuchirwa.
Zvirinani Performance & Kubudirira:
Zvidzidzo zvakaratidza kuti hupfumi hwemafuta hunogona kuvandudzwa ne14% nemhepo yakachena firita.
Conqi mweya firita inovandudza mhando uye huwandu hwemweya wakachena unopinda muinjini, izvi zvinovandudza kuita kweinjini uye kugona.
Yakakwirira Injini Yekudzivirira uye Enhanced Injini Performance ine inosvika 99% yakachena mweya isati yayerera kupinda muinjini yemota.
Yakakwira inokwenenzvera mhepo firita midhiya yekubvisa zvinokuvadza zvinofefeterwa nemhepo zvakaita seguruva, mukume, uye mamwe marara apo uchipa yakakwira mweya, isingaregedze kufema kwemhepo, kuve nechokwadi chakaringana injini mashandiro ayo anovandudza mota mamaira pagoroni.
Inoenderana neMitsubishi ASX, Lancer, Outlander, Outlander Sport, RVR. Yakagadzirwa, yakagadzirirwa, uye kuyedzwa kuti isangane uye inopfuura zvese MITSUBISHI OE mweya firita zvinodiwa.
Conqi mweya firita yakakwana zvakakwana mukati meimba sekuenderana neOE dhizaini
Zvakawanda Zvakanakira Conqi Mafirita Emhepo
Yakawedzerwa Fuel Economy
Nema filters emhepo-emhando yepamusoro unowana mafuta akakwana kupisa uye nekukwidziridzwa kweinjini, kuwedzera hupfumi hwemota yako.
Premium Guard mota mafirita emhepo anokwenenzvera kuyerera kwemweya wakachena muinjini yekuwedzera injini kuita uye simba.
Yakagadzirwa kusangana kana kudarika OEM (Original Equipment Mugadziri) zvinodiwa, isu tinopa zvakaenzana zvakafanana neyekutanga firita. Kusunga kweOEM kunovimbisa nyore auto auto firita yekumisikidza nguva dzese.
Ichisanganisa inokwanisika, yakananga-kune-mutengi mitengo uye epamusoro mhando zviyero, idzi injini mweya mafirita anounza hukuru hukuru pamwe nepamusoro kudzivirirwa uye mashandiro.
* Dzimwe mamiriro anogona kukanganisa hupenyu hwemhepo firita. Zvimwe zvinokonzeresa zvekuwedzera kutsiva zvinosanganisira:
Migwagwa ine guruva
Mamiriro ekunze ane hunyoro
Migwagwa yakamanikana uye nzvimbo dzinorema-traffic
Zviratidzo Zvakajairika Inguva Yekutsiva Yenyu Injini Mhepo Sefa
Injini Chiedza Inouya Pa: Mota zhinji dzakashongedzerwa neyemhepo yekufema sensor iyo inodzima cheki cheinjini.
Kuongorora Kwekuona: Conqi mota mafirita emhepo machena kuti iwe ugone kuona kana vakasviba. Tarisa kunze nekumukati zvidimbu zvefirita pepa kuti uwane guruva nemarara.
Yakaderedzwa Fuel Economy:Kana injini dzikawana oxygen shoma, dzinoshandisa mafuta akawanda. Kana iwe ukaona hupfumi hwemafuta huchienda pasi, ungangoda kutsiva iyo firita yemhepo.
Injini Inogutsa:Kudziviswa kwemagetsi kunoguma nemafuta asina kubviswa achibuda muinjini semasarasara. Soot inounganidzwa pamatanda plugi, ayo anogona kukonzera kuti injini ipise zvisizvo.
Yakaderedzwa Horsepower:Kutsiva mweya firita kunogona kuvandudza kumhanyisa kana simba rebhiza. Kana mota yako ikasadaira zvakanaka kana majee kana iwe ukatsika pane yekuwedzera, injini inogona kunge isiri kugamuchira mweya wainofanira kuita.
Nhema Sooty Utsi kana Marimi:Kushaya mweya kwakaringana kunogona kukonzeresa kuti mafuta asatsve zvachose panguva yemoto. Mafuta asina kutsva anobuda mumotokari kuburikidza nepombi yekuzadza, pamwe zvichikonzera hutsi kana murazvo.
1. Tarisa pakugadzira zvinokwikwidza mota mafirita kune vatengi vedu kuti vasangane nemusika wavo, vape ruzivo rwehunyanzvi hwekugadzirwa kwezvigadzirwa.
2. Hupfumi ruzivo rwekunze mafirita emota uye mapulagi emoto kuEurope, United States, Russia, Mexico, North America, Southeast Asia, nedzimwe nyika, isu tinoziva nezve yavo yemusika musika uye tsika yekubvumidzwa uye isu tinogona kukupa iwe wekunze kuraira.
3.Trade Assurance kuitira kuti uve nechokwadi chekuvimbika kwedu, tobva tazadzisa win-kuhwina mamiriro.
Pashure: Mugadziri Kupa Yemhando yepamusoro Mhepo Sefa OE NO 2730940404 1120940004
Zvadaro: Auto Cabin Mhepo firita MME61701 MZ341012EX MN185231 MR398288 MZ600143 MZ690361 XR398288
Mhepo Sefa Asiria
Mhepo Sefa YeHino Rori
Mhepo Sefa YeMudhudhudhu
Mota Mhepo Sefa YeToyota
Honda Mhepo Sefa